खुलेको १५ मिनेटबाटै रोकियो लाइसेन्सको आवेदन !::Hamrodamak.com
खुलेको १५ मिनेटबाटै रोकियो लाइसेन्सको आवेदन !
काठमाडौँ।लामो समयपछि शुक्रवारबाट खुलेको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को नयाँ आवेदन खुला भएकाे १५ मिनेट बाटै रोकियो। लाइसेन्सको अनलाइन आवेदन विभागको सरबर डाउन भई सफ्टवेयरले काम नगरेपछि देशभरका अनलाइन फारमको आवेदन अवरुद्ध भएको हो ।
दशैंअघि बन्द गरिएको नयाँ आवेदन चाडपर्व सकिएपछि खुला गरिएको थियो । शुक्रबार वेवसाइट नै ह्याङ भई काम हुन नसकेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले भने -, ‘विहान १५ मिनेट जति काम भयो त्यसपछि ओभरफ्लो भएर दिनभरि काम भएन, क्षमता थप गर्ने काम भएको छ, प्राविधिकहरुले काम गरिरहनुभएको छ भोलि सुधार हुन्छ ।’
विभागका अनुसार अनलाइन आवेदन फारम भर्नका लागि यस्तो समस्या यसअघि भएको थिएन् । बीचमा आवेदन वन्द गरिएका हुँदा अहिले एकै पटक सबैले फारम भरेकाले ओभरफ्लो भएको विभागले जनाएको छ ।